Umthetho we-ICT | Law & More BV | Law & More | I-Eindhoven kunye neAmsterdam
Ngenxa yokuyilwa kwe-Intanethi, imibuzo emininzi yezomthetho ivele. Oku kwalandelwa kukufakwa komthetho we-ICT. Umthetho we-ICT uneendawo ezininzi zokunxibelelana nezinye iindawo zomthetho, ezinje ngomthetho wesivumelwano, umthetho wabucala kunye nomthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Kuzo zonke ezi ndawo zomthetho, imibuzo malunga nomthetho we-ICT inokuphakama. Le mibuzo inokuba yile ilandelayo: 'kungenzeka ukuba ubuyise into endiyithengileyo kwi-intanethi?', 'Ngawaphi amalungelo am xa usebenzisa i-intanethi kwaye akhuselwa njani la malungelo?' kwaye 'ingaba umxholo wam okwi-intanethi ukhuselekile phantsi komthetho welungelo lokushicilela?' Nangona kunjalo, umthetho we-ICT ngokwawo unokwahlulwa ngokweendawo ezithile zomthetho we-ICT, njengomthetho wesoftware, umthetho wezokhuseleko kunye ne-e-commerce.
KUFUNEKA KUFUNA UMNYANGO WE-ITC?
Ngenxa yokuyilwa kwe-Intanethi, imibuzo emininzi yezomthetho ivele.
> UMthetho woKhuseleko
> I-SAAS kunye neLifu
> Iikhontrakthi ze-IT
> Izikimu zokuqhubeka kunye ne-Escrow
> Umthetho weVenkile yeWebhu
> Ukubamba kunye nokuVuya
> Umthetho weSoftware
> I-Software Source Open
> Isoftware yeMizi-mveliso
Oku kwalandelwa kukufakwa komthetho we-ICT. Umthetho we-ICT uneendawo ezininzi zokunxibelelana nezinye iindawo zomthetho, ezinje ngomthetho wesivumelwano, umthetho wabucala kunye nomthetho wepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Kuzo zonke ezi ndawo zomthetho, imibuzo malunga nomthetho we-ICT inokuphakama. Le mibuzo inokuba yile ilandelayo: 'kunokwenzeka ukubuyisela into endiyithengileyo kwi-intanethi?', 'Ngawaphi amalungelo am xa ndisebenzisa i-intanethi kwaye akhuselwa njani la malungelo?' kwaye 'ingaba umxholo wam okwi-Intanethi ukhuselekile phantsi komthetho welungelo lokushicilela?' Nangona kunjalo, umthetho we-ICT ngokwawo unokwahlulwa ngokweendawo ezithile zomthetho we-ICT, njengomthetho wesoftware, umthetho wezokhuseleko kunye ne-e-commerce.
Iqela le Law & More Unolwazi olucacileyo malunga nomthetho we-ICT ngokubhekisele kwimimandla yomthetho edibana nomthetho we-ICT Ke ngoko, amagqwetha ethu anokukucebisa malunga nezi zifundo zilandelayo:
• Umthetho wezokhuseleko;
• I-SaaS kunye neLifu;
• Iikhontrakthi ze-IT;
• Amalungiselelo okuqhubeka kunye nescrow;
• Umthetho webshop;
• Indawo yokubamba indawo yokuhlala;
• Umthetho wesoftware;
• Vula isoftware yomthombo;
• Isoftware yeMveliso.
Umthetho Wezokhuseleko yintsimi yomthetho ejongene nokukhuselwa kolwazi. Izihloko ezingaqhelekanga kule ndima yomthetho zibandakanya intsholongwane zekhompyuter, ukungena ngaphakathi kwekhompyuter, ukukhangela kunye nokuthintela idatha. Ukugcina ulwazi oluyimfihlo noluyimfihlo lukhuselekile, kukho iseti yonke yamanyathelo anokwenzeka. Umzekelo, iinkampani ngokwazo zihlala zisebenzisa amanyathelo angekho semthethweni ngokusekwe kuhlalutyo lomngcipheko. Nangona kunjalo, olu khuseleko lusisiseko esisemthethweni. Emva kwayo yonke loo nto, yindlu yowiso-mthetho emisela ukuba zingangqongqo kangakanani ezi nkqubo zokhuseleko.
Xa ucinga ngamanyathelo okuwisa umthetho umntu unokucinga kwakhona ngegama elithi 'Wet bescherming Persoonsgegevens' (UMthetho woKhuseleko lweDatha). UMthetho woKhuseleko lweDatha yoBuntu uthi kufuneka kucace ukuba ngawaphi amanyathelo athatyathiweyo ukukhusela idatha yobuqu ekulahlekelweni okanye ekungekho mthethweni. Oku kunokubandakanya unxibelelwano olufihliweyo phakathi kweseva kunye nomtyeleli: unxibelelwano lwe-SSL. Iiphasiwedi ziyinxalenye yokhuseleko olunjalo.
Ngaphandle koMthetho woKhuseleko lweDatha yakho, izenzo ezithile nazo zichasene nolwaphulo-mthetho. Ukugenca kuya kohlwaywa ngesiseko senqaku le-128ab leKhowudi yoLwaphulo-mthetho lwaseDatshi.
Ukukhusela ulwazi lwakho, kubalulekile ukwazi ukuba lusebenza njani ukhuseleko lolwazi kunye nendlela yokukhusela idatha yakho kunye nomnye umntu ngendlela ekhuselekileyo. Law & More inokukucebisa ngemiba esemthethweni yokhuseleko lolwazi.
I-SAAS kunye neLifu
Isoftware njengeNkonzo, okanye i-SaaS, yisoftware enikezelwa njengenkonzo. Kwinkonzo enjalo, umsebenzisi akadingi ukuthenga software, kodwa unokufikelela kwi-SaaS kwi-intanethi. Uncedo lweenkonzo ze-SaaS kukuba iindleko zomsebenzisi ziphantsi.
Inkonzo ye-SaaS njengeDropbox yenkonzo yamafu. Inkonzo yelifu yenethiwekhi apho ulwazi lugcinwa khona efini. Umsebenzisi ayisiye umnini wefu kwaye ngenxa yoko unoxanduva lokugcina. UMboneleli wefu unoxanduva lwefu. Iinkonzo zelifu zikwabotshelelwa kwimigaqo ethile, ikakhulu eyimithetho enxulumene nemfihlo.
Law & More inokukucebisa kwii-SaaS zakho kunye neenkonzo zefu. Amagqwetha ethu anolwazi kunye namava kule ndima yomthetho, ngenxa yoko anokukunceda ngayo yonke imibuzo yakho.
Ngenxa yelizwe lethu ledijithali, iinkampani ezininzi ziye zaxhomekeka ekusebenzeni kwetekhnoloji yolwazi ngokufanelekileyo. Ngenxa yolu phuhliso, iya iba ngakumbi nangakumbi into yokuba imicimbi ethile ye-IT ilungiswe kakuhle. Umzekelo, xa kuthengwa izixhobo okanye ilayisensi yesoftware, makwenziwe isivumelwano se-IT.
Iikhontrakthi ze-IT, njengoko igama libonisa, akukho nto ingaphantsi kweekhontrakthi "eziqhelekileyo" ezifana neemeko zokuthenga ngokubanzi, ingxelo yabucala, izivumelwano zomsebenzi, izivumelwano zesoftware, izivumelwano ze-SaaS, izivumelwano zefu kunye nezivumelwano zescrow. Kwisivumelwano esinjalo, kwenziwa izivumelwano ngokubhekisele, umzekelo, ixabiso, iwaranti okanye uxanduva ngokubhekisele kokulungileyo okanye inkonzo.
Kunokubakho iingxaki xa uyila okanye uthobela ikhontrakthi ye-IT. Apho, umzekelo, unokungaqiniseki ngento emele ihanjiswe okanye phantsi kwamagama athile. Kubalulekile ke ngoko ukuba kwenziwe amalungiselelo acacileyo kwaye la malungiselelo abhalwe kwisivumelwano.
Law & More banokucebisa ngazo zonke izivumelwano zakho ze-IT. Siza kuvavanya imeko yakho kwaye sinokwenza idrafti yesivumelwano somgangatho wesandi sokuhlangabezana neemfuno zakho.
Izikimu zokuqhubeka kunye ne-Escrow
Kubasebenzisi bethekhnoloji yolwazi kubalulekile ukuba baqiniseke ukuba isoftware yabo kunye nedatha iyaqhubeka nokusetyenziswa. Inkqubo yokuqhubekeka inokunika isisombululo. Iskimu sokuqhubekeka okunjalo kuya kugqitywa ngokubambisana nomnikezeli ngenkonzo we-IT. Oku kuthetha ukuba, kwimeko yokubhangiswa, umzekelo, iinkonzo ze-IT zingaqhubeka.
Ngenjongo yokuseka iskimu sokuqhubekeka, kuya kuba yimfuneko ukujonga uhlobo lwenkonzo ye-IT. Ngamanye amaxesha inkqubo yekhowudi yescrow iyakwanela, ngelixa kwezinye iimeko ziya kuba yimfuneko ukwenza amalungiselelo ongezelelweyo. Kwimeko yokuqhubeka kweLifu elinye umzekelo kufuneka lihlale likhumbula bobabini abaxhasi kunye nababoneleli ababambeleyo.
Iskimu sokuqhubeka kubalulekile ukugcina idatha yakho. Law & More inokukucebisa ngenkqubo yokuqhubeka. Singakunceda ukuyila isikimu ukuze ukhusele isoftware yakho kunye nedatha.
Umthetho weVenkile yeWebhu
I-Webshops ijongene nenani elikhulu leenkqubo zomthetho ekufuneka zithobele. Ukuthenga umgama, amalungelo abathengi, umthetho wecookie, izikhombisi zaseYurophu nokunye okunezinto zomthetho ekuza kujongwana nawo ne-webshop. Igama elithi 'umthetho wevenkile yewebhu' linika ixesha elibandakanya konke oku.
Ngenxa yemithetho emininzi, kungenzeka ukuba ngaxa lithile 'awunakubona iinkuni zemithi'. Ngaba kufuneka ndisebenzise imigaqo kunye neemeko? Ukhumbula njani umsebenzi wabathengi? Loluphi ulwazi endifanele ndilunikeze kwiwebhusayithi yam? Yeyiphi imigaqo ngokubhekisele kwintlawulo? Kuthekani ngomthetho wecookie? Ndingenza ntoni ngedatha yobuqu endiyifumene kwivenkile yam yewebhu? Olu lonyulo lwemibuzo onokuthi ahlangane nayo umnini wevenkile.
Kubalulekile ukuba le micimbi icwangciswe ngokufanelekileyo. Ngaphandle koko, unokufaka umngcipheko wokuhlawuliswa. Ezi ntlawulo zinokufikelela kubude obukhulu kwaye zinokuba nefuthe kwinkampani yakho. Ukwazi kakuhle ngale micimbi kuya kunciphisa umngcipheko wakho.
Law & More inokukucebisa ngokuthobela kwakho umthetho ofanelekileyo. Ngapha koko, sinokukunceda uyile amaxwebhu asemthethweni afanelekileyo kwivenkile yakho yewebhu.
Ukubamba kunye nokuVuya
Xa umntu ebamba okanye enqwenela ukusingatha iwebhusayithi, umntu kufuneka azikhumbule izinto ezisemthethweni ezisetyenziswayo. Xa ubamba iwebhusayithi, idatha iya kugcinwa kwaye ngamanye amaxesha ide idluliselwe. Kubalulekile ke ukwazi ukuba kufuneka uyiphathe njani le v-datha-ye-v yakho ngumthengi wakho, kodwa nakwabanye abantu.
Kuya kufuneka ube nemigaqo ecacileyo malunga nokusingathwa kwakho kunye nezinto zalo ezisemthethweni. Kubalulekile ukuba abathengi bazi ukuba kwenzeka ntoni ngeedatha zabo. Abathengi babona kubalulekile ukuba idatha yabo ikhuselwe ngononophelo. Kukwabalulekile ukwazi ukuba ngubani onoxanduva xa kusaphulwa imigaqo yedatha.
Uyacelwa ukuba ukhusele ubumfihlo babathengi bakho? Ngaba ufuna ukubonelela ngolwazi lokuqhagamshelwa ukuba oku kucelwe ngamapolisa? Ngaba unoxanduva lokukhusela idatha kunye nokophulwa kwedatha? Amagqwetha ethu anokuphendula yonke le mibuzo neminye imibuzo. Unokuba unemibuzo, ungasoloko unxibelelana nomnye wabameli be Law & More.
Kule mihla, bekuya kuba sengqiqweni ukuba ungaphila kwihlabathi elingenasoftware. Umthetho wesoftware ubalulekile kubo bobabini abaphuhlisi besoftware kunye nabasebenzisi beesoftware.
I-'Auteurswet '(Umthetho weLungelo lokushicilela) ichaza ukuba ngubani na ongumnini wesoftware ethile. Xa uziqhelanisa, nangona kunjalo, akuhlali kucace ukuba ngubani ongowesoftware kwaye ke unelungelo lokushicilela. Abaphuhlisi beesoftware abathengisa imveliso yabo, bahlala bafuna ukugcina amalungelo abo okushicilela. Oku kunciphisa amathuba okuba abasebenzisi besoftware batshintshe isoftware. Iya iba nzima ngakumbi xa umsebenzisi efuna ukuvelisa (eyakhe) isoftware. Ngubani oza kuthi afumane amalungelo okushicilela?
Ukunciphisa umngcipheko wakho, kubalulekile ukuthatha isigqibo kwangaphambi kokuba ngubani oza kufumana amalungelo okushicilela. Law & More inokukucebisa ngomthetho wesoftware kwaye inokuphendula imibuzo yakho ngokubhekisele kweli candelo lomthetho.
I-Software Source Open
Kwimeko yesoftware evulelekileyo, umsebenzisi ufumana ikhowudi yesoftware xa uthenga ilayisensi. Esi sibonelelo sinokubakho sokuba abasebenzisi banokuthi benze ngokwezifiso kwaye baphucule isoftware ukuze isoftware iqhubeke nokukhula. Kwithiyori, oku ngokuqinisekileyo kuvakala kuyingenelo kwaye kufanelekile ngokufanelekileyo: nabani na onolwazi lweekhowudi unokuhlela isoftware yomthombo ovulelekileyo.
Xa uziqhelanisa, nangona kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuseta imigaqo ethile yokusetyenziswa kwesoftware evulelekileyo, ukulawula kunye nokucacisa usetyenziso lwesoftware evulelekileyo. Oku kubaluleke ngakumbi ngoku akukho kubekwa esweni okuncinci, ngeli xesha amabango amaninzi engeniswa ngokwaphula iilayisensi zesoftware evulekile.
Law & More inokukucebisa ngesoftware evulelekileyo. Ngaba uya kuhlala ungumnini wesoftware oyivelisileyo xa usebenzisa isoftware evulelekileyo? Ngawaphi amagama kunye neemeko onokuthi ubeke phantsi ukusetyenziswa kwelayisensi? Ungasingenisa njani isimangalo xa iphepha-mvume lakho ligqityiwe? Le yimibuzo enokuphendulwa ngomnye wabameli bethu.
Isoftware ayisetyenziswa kuphela kwiiofisi, kodwa nakwishishini. Iimveliso kunye noomatshini zixhotyiswe okanye ziphuhliswe ngesoftware. Le software emiselweyo ibhalelwe ukulawula oomatshini okanye iimveliso. Imizekelo yolo hlobo lwesoftware inokufumaneka koomatshini, izibane zezithuthi kunye neemoto.
Kanye njengokuba ibalulekile kwisoftware 'eqhelekileyo,' (umthetho-mveliso) isoftware ibalulekile kwisoftware kwaye ibonelela ngemithetho efanelekileyo kubo bobabini abaphuhlisi besoftware kunye nabasebenzisi beesoftware. Umzi mveliso wesoftware ufumana utyalomali oluninzi, okwenza ukuba kubalulekile ukukhusela amalungelo okushicilela afanelekileyo.
Mr. UMaxim Hodak, igqwetha kwi & Ngaphezulu - maxim.hodak@lawandmore.nl